इटाली - पर्यटकहरु को बहुमत को सपना। यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक वास्तुकला स्मारक र प्राकृतिक सौन्दर्य लागि आकर्षक छ। तर, जाने क्रममा, तपाईं पार व्यवस्था गर्न आवश्यक कागजात। एउटा भिसा लागि कागजातहरू अग्रिम सङ्कलन गर्न इटाली।
सबै को पहिलो, तपाईं पनि अन्तिम यात्रा पछि3महिना पछि मान्य हुनैपर्छ एक पासपोर्ट हुनुपर्छ। अन्यथा - यो आवश्यक नयाँ राहदानी जारी छ। कागजात तीन खाली पृष्ठ हुनुपर्छ।
लागि कागजात सबै सूची जो सूची, इटाली गर्न भिसा, निम्न अनुच्छेद अघिल्लो पासपोर्ट देखिन्छ (कागजात प्रक्रिया अघि भने)। यसलाई आफ्नो यात्रा को इतिहास जाँच गर्न, र तपाईँले एक BONA fide पर्यटक भने हेर्न आवश्यक छ।
पनि एक देश को नागरिक को पासपोर्ट प्रदान गर्न निश्चित हुनुहोस्। स्वाभाविक, कागजात निवास स्थान मा एक दर्ता हुनुपर्छ। यसबाहेक, यो कम्तिमा 90 दिनको लागि मान्य हुनुपर्छ।
सूचीमा अर्को एक भिसा लागि प्रोफाइल छ। इटालियन वा अंग्रेजी यसको आवश्यकता भर्नुहोस्। आवेदन मा तपाईं व्यक्तिगत हस्ताक्षर राख्नुपर्छ गठन। यस यात्री बहुमत को उमेर पुगेको छ भने, साइन आफ्नो आमाबाबु हुनुपर्छ। एक पानामा तस्वीर3*4सेमी पालन गर्न।
इटाली भिसा लागि कागजात बनाउने, यो पाहुना देशहरूमा भित्र होटल आरक्षण को पुष्टि हुनेछ विवरण चित्रित यात्रा मा दूतावास, प्रदान गर्न मनमोहक छ। पनि आरक्षण को मूल्य को यात्रा मा निर्दिष्ट हुनु पर्छ, आधिकारिक छाप पुष्टि (यो होटल देखि पठाइएको फ्याक्स प्रदान गर्न पर्याप्त छ)।
पनि इटाली लागि भिसा कागजात आपूर्ति envisage होटल आरक्षण पूर्वभुक्तान पुष्टि लागि (यहाँ तपाईं पनि होटल देखि एक फ्याक्स प्रदान गर्न सक्छन्)। यस्तो पुष्टि इटाली को एक नागरिक देखि मूल निमन्त्रणा दिइएको सकिन्छ सट्टा, भौचर पर्यटन देश को कम्पनीहरु, राज्य वा देश मा आफ्नो सम्पत्ति को उपस्थिति भन्न जो मूल कागजात, इलाका मा पट्टा परिसर।
इटाली एउटा भिसा प्राप्त लागि कागजात बनाउने, तपाईं धन को एक पर्याप्त रकम छ जो एक बैंक खाता, छ भनी पुष्टि बयान बारे मा भूल छैन। उपस्थिति स्वागत यात्रु चेकबाट, को अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड, सीमा संकेत जो।
साथै, एक सेन्जेन भिसा लागि कागजात बाहिर बनाउने इटाली, यो आवश्यक पनि दूतावास मान्य यात्रा बीमा नीति दिन छ। दुवै पक्ष गर्न पहिले नै किनेको टिकट देखाउन नबिर्सनुहोस्! तपाईं कार द्वारा इटाली जाने जाँदैछन् भने, तपाईं कार को स्वामित्व मा एक विशेष नमूना कागजातहरू एक चालक अनुमतिपत्र, साथै अन्तर्राष्ट्रिय बीमा हुनुपर्छ।
अर्को आवश्यक कागजात छ रोजगारीको प्रमाणपत्र, को पर्यटन को जो निर्दिष्ट कार्यालय, मासिक तलब, देश, हस्ताक्षर र कर्मचारी संगठनको टिकट छोडेर को समयमा छुट्टी पुष्टि।
यो मूल कागजात र आफ्नो फोटोकपी पेश गर्न आवश्यक छ कि सम्झना हुनुपर्छ। मूलहरू जानकारी मान्य गर्न आवश्यक छन्।
बेलारुस को स्वास्थ्य रिसोर्ट्स - रिसोर्ट मा स्विमिंग पूल र मनोरञ्जन दुवै संग
Mundial क्लब3*, स्पेन: समीक्षा
Pikabolo: सेन्ट पीटर्सबर्ग मा दर्पण Maze, सकारात्मक भावना धेरै ल्याउनेछ जो!
हामी छोड्न योजना। रीगा मा के हेर्न?
दुई विकल्प: कसरी आफ्नै रस मा टमाटर के
, स्वादिष्ट सरल र परम्परागत नुस्खा बीफ हृदय र अपरंपरागत प्रयोग
म प्रेम मा राशि गिरावट को विभिन्न संकेत आश्चर्य?
कसरी आफ्नो हातमा भान्सा लागि पर्दे सी गर्न?
रूसी निर्माता Baltmotors र मोटरसाइकिल "क्लासिक"
बकरी मा स्वास्थता को उपचार। एक बकरी मा हस्तमैथुन कसरी उपचार गर्ने?
Puff केक को पाक। सबै भन्दा राम्रो hostesses को रहस्य
घर एसयूवी: तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी बनाउने?